Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha bacda kaadiheysta - Shiinaha Warshad bacda kaadiheysta
Orodka Baaskiilka Boorashka Hawada Bixinta
Lammaanaha ugu fiican ee boorsooyinka fuuq baxa, ku rid boorsadaada fuuq bax shandad, oo ku hagaaji tubada nuugista suunka garbaha. Waad buuxin kartaa qoyaanka wakhti kasta iyo meel kasta oo aadna xorayn kartaa gacmahaaga. Haddii aad fuuleyso, ama aad orodaysid, ama aad baaskiil wadaysid ama baaskiil wadid saameyn ku yeelan mayso.
Boorsada keydka keydka dibedda Boorsada Baaskiilka La qaadan karo
Alaabada isboortiga ee dibedda ka sameysan kara lammaanaha ugu fiican boorsooyinka biyaha. Si gaar ah loogu talagalay bacaha biyaha isboortiga. Si fiican u duubmi kara oo qaadi kara boorsadaada biyaha. Kuu ogolaanayaa inaad ku qaadato boorsadaada biyaha markaad banaanka joogto, adigoon culeys dheeri ah kugu kordhin. Kuu ogolaanayaa inaad dib u buuxiso kheyraadka biyaha wakhti kasta oo banaanka ah si aad u ilaaliso shaqada jirka.
Shayga Maya: WBB-001
Magaca badeecada: Boorsada kaadi haysta kaadi haysta
Isticmaal: Socdaal / Kaamamayn / Socdaal
Cabir: 45 * 21cm
Bannaanka Cayaaraha Fuuq-baxa Cayaaraha Ciidanka Boorsada Cagaaran
Boorso fuuq-bax ah oo qoyan oo ciidan ah. Ka samaysan maadada 'EVA light', ma kuu keenayso culays dheeraad ah. Kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso ah u buuxiso biyaha inta lagu jiro jimicsiga. Wax soo saarku waa mid ku habboon isla markaana la neefsan karo iyada oo aan la gariirin, wuxuuna u dhigmaa naqshada ergonomic.
Boorso Kaadiheysta Kaydka Ciyaaraha Dibadda Tayo Wanaagsan
Boorsada dibedda ee boorsada biyaha isboortiga oo u baahan habboonaan iyo wax ku oolnimo aad u daran. Dhib malahan haddii aad biyo cabto, biyo buuxiso, ama aad nadiifiso bacda biyaha. Hawlgallada oo dhan si toos ah ayaa loo samayn karaa iyada oo aan bacda biyaha laga soo qaadin boorsada dhabarka. Adiga u tartamaya waqtiga waqtiga isboortiga, wuxuu noqon doonaa kaaliyaha ugu fiican.
Shayga Maya: WBB-004
Qalabka: Oxford EVA
Boorsada dhabarka ee kaadiheysta Cas Cas
Boorso biyo ah oo si qaas ah loo qorsheeyay, bacda biyaha kuma ridi kartid booska gadaashiisa, laakiin sidoo kale waxaad ku ridi kartaa laba dhalo oo jilicsan booska laabta, taas oo si weyn u wanaajinaysa awoodda qaadista ilaha biyaha.
Bacda kaadiheysta banaanka ee boorsada loogu tala galay Baaskiil wadista Baaskiilka
Markaad baaskiil wadid, orodayso, fuulidayso, ama dibedda u gudbeyso. Waxaad u baahan tahay inaad guri u hesho boorsadaada biyaha si aad u xoraysid gacmahaaga oo aad diiradda u saarto jimicsigaaga. Waxyaabaha loo yaqaan 'nylon' iyo naqshadeynta wanaagsan waxay ku siinayaan wax badan oo kugu habboon jimicsigaaga.
Boorsada dibedda ee baaskiil wadista. Waxyaabaha PET naylon tayo sare leh. Boos weyn oo karti leh, boorso la neefsan karo, oo fudud oo qafiif ah, ilmada u adkaysta, ku habboon cabitaanka. Boorsadaada shandadaada dhabarkaaga, ku raaxeyso oo la qaadan karo, si sahlan dagaal u gal.
Bacda Biyaha Ciyaaraha Dibedda
Boorsada nayloon ee dharka lagu nadiifiyo ee banaanka ah waxay qaadi kartaa 11 litir oo baaxad weyn leh waxayna leedahay naqshad fudud oo gaadheysa 0.2 kg. Kuu ogolaanayaa inaad si fudud ugu qaadatid dhabarkaaga markii aad sameyneyso dhamaan cayaaraha banaanka. Bacda fuuq-celinta iyo boorsada biyaha ayaa had iyo jeer ah lamaanayaasha ugu fiican. Isku darka labadan sahay ayaa kuu keeni doona khibrada isboorti ee banaanka ugu fiican.